Otu esi egosi onye hụrụ gị n'anya | Bezzia
Maria José Roldan | 18/10/2021 22:57 | Mmekọrịta
Inwe ike igosi di na nwunye ịhụnanya dị mkpa mgbe ihe niile na -arụ ọrụ na na mmekọrịta ahụ n'onwe ya na -esiwanye ike. Onye ọ bụla na -enwe mmasị ịnata mmetụta ịhụnanya na ngosipụta ịhụnanya site n'aka onye ọ hụrụ n'anya, mana di na nwunye bụ okwu abụọ na a ga -egosikwa ịhụnanya n'ebe onye nke ọzọ nọ.
N'edemede na -eso, anyị na -egosi gị ụdị mmadụ niile nwere mgbe ọ na -abịa igosi ịhụnanya gị maka onye gị na ya na -emekọ ihe.
Enwere ike igosi ịhụnanya n'ọtụtụ ụzọ na ụzọ ma ọ bụ n'okwu, na anya ma ọ bụ na -emetụ aka. Ihe dị mkpa karịa ihe niile bụ na e mere nlele ịhụnanya ndị a site n'eziokwu kachasị na ịkwanyere onye a hụrụ n'anya oge niile. Anyị na -agwa gị ụfọdụ ụzọ isi mee ya:
Eziokwu nke igosi ịhụnanya n'ebe onye ọzọ nọ abụrụla ihe dị mkpa iburu n'uche. Ọ dịghị mkpa ịla azụ n'oge ọ bụla wee hụ di na nwunye ahụ n'anya mgbe ha nwere mmetụta n'ezie ma hụ ibe ha n'anya. Ọ baghị uru ọ bụla kemgbe eziokwu nke igosipụta ụdị ịhụnanya a, na -ebute ọdịnihu dị mma nke mmekọrịta n'onwe ya.
A ghaghị igosipụta ịhụnanya na nnwere onwe na n'ụzọ kachasị nwee ike. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya igosipụta ịhụnanya ụfọdụ mgbe ị nwesịrị ụdị nrụgide sitere n'akụkụ nke ọzọ nke di na nwunye ma ọ bụ site na onye ọzọ na -abụghị mmekọrịta.
Ịhụnanya ekwesịghị ịbụ naanị igosipụta mmetụta na mmetụta nke onye ọzọ. Ọ dịkwa mkpa inwe mmasị na ọdịmma nke di na nwunye ahụ nakwa na ị na -ama oge niile na ọ bụghị naanị gị n'oge dị mma ma ọ bụ n'oge ihe adịghị mma.
Ụzọ kacha mma isi gosi onye gị na ya na -ahụ n'anya bụ site na kọntaktị anụ ahụ. Ọ nweghị ụzọ mara mma ma dị ụtọ karịa inwe ike inye ịhụnanya site na nsusu ọnụ ma ọ bụ mmetu aka. Mmekọahụ anụ ahụ bụ isi maka di na nwunye ahụ inwe obi ụtọ yana ọ happyụ.
Na mmekọrịta ị ga -amatarịrị ka ị na -ege onye ị hụrụ n'anya ntị oge niile. Ịhụnanya gụnyekwara itinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ onye ọlụlụ na ịmara mmetụta ha, ihe na -echegbu ha ma ọ bụrụ na ha nwere ụdị egwu ọ bụla. A na -enweta ihe a niile site na ịge ntị nke ọma.
Otu n'ime ụzọ kacha mma isi gosi onye hụrụ gị n'anya na ịhụnanya gị, Ọ gụnyere ịrara oge gị nye ya. Nke a na-enyere ọdịmma aka itinye na mmekọrịta na ihe niile na-aga n'ụzọ kacha mma.
Na nkenke, onye ọ bụla nwere ụzọ nke aka ya si egosi ibe ya ịhụnanya. Igosipụtaghị ụdị ịhụnanya a adịghị mma maka mmekọrịta ahụ ma ọ bụrụ na ọ na -adịte aka oge ọ ga -ekwe omume na di na nwunye ahụ ga -akwụsị kpamkpam. A pụghị ileghara ụdị ịhụnanya a anya na ekwesighi iburu ya n'uche mgbe niile ka ọ bụrụ n'ụzọ a, mmekọrịta a na -ekwu ga -adị mma dịka o kwere mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Otu esi egosi ịhụnanya nye onye gị na ya na -emekọ ihe
Porridge na almond na ude banana
Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji hazie ma chepụta kichin gị